Shiinaha BENZALKONIUM CHLORIDE warshad iyo soosaarayaasha | FARXIYA-FARMAAJO
Benzalkonium Chloride waa shey muhiim u ah quanternary ammonium salt surfactant, kaas oo si weyn loogu isticmaalo daryeelka shakhsi ahaaneed, shaambo, qaboojiyaha iyo alaabada kale. Waxay leedahay saameyn anti-guurto ah, dabacsan iyo anti-daxalka, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in jeermiska, daabacaadda iyo dheeh dheeh, dhar dhaqidda iyo warshadaha kale.
Tijaabinta: 80% EINECS No. 205-351-5 Benzalkonium Koloriin1227 waa nooc ka mid ah waxsoosaarka xasaasiga ah, oo ka tirsan ismiidaaminta aan xasilooneyn. Benzalkonium Chloride 1227 waxay si hufan u hakin kartaa faafinta algae iyo dhalmada dhoobada. Benzalkonium Chloride 1227 sidoo kale waxay leedahay firidhsan iyo soo dhexgalid guryaha, way dhex geli kartaa kana saari kartaa dhoobada iyo algae, waxay leedahay faa iidooyinka sunta hooseysa, isku soo ururinta sunta, ku milma biyaha, ku habboon isticmaalka, oo aan saameyn ku yeelan adkaanta biyaha. Benzalkonium Chloride 1227 sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa wakiilka anti-carrada, wakiilka antistatic, emulsifying
wakiilka iyo wakiilka wax-ka-beddelka ee dukumintiyada iyo dheehyada. waxyaabaha tusmada Muuqaalka dareeraha iftiinka iftiinka huruudka huruudka ah Isticmaalka adag: Sida isdifaaca aan sunta aheyn, qiyaasta 50-100mg / L ayaa la door bidaa; maaddaama laga saarayo sludge remover, 200-300mg / L ayaa la door bidaa, wakiilka jirka ee jirka kufilan ee antifoaming waa in lagu daraa ujeedkan. DDBAC /BKCwaxaa loo wada isticmaali karaa fungicidal kale sida isothiazolinones, glutaraldegyde, dithionitrile methane for synergism, laakiin looma wada isticmaali karo kiniiniyada chlorophenols. Haddii bulaacadu u muuqato kadib markii lagu tuuray sheygan biyo qabow wareegaya, bulaacada waa in la sifeeyaa ama la qarxiyaa waqtiga si looga hortago dhigaalkooda hoose ee taangiga aruurinta ka dib markii la waayay xumbo.
Hore: SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 70% (SLES)
Xiga: DICHLOROMETHANE / METHYLENE CHLORIDE